IFENITSHALA YANGAPHANDLE YE-ACACIA WOOD (IINKONZO KUNYE NENGXELO) - IINDAWO ZOKUPHILA NGAPHANDLE
Eyona iindawo Zokuphila Ngaphandle Ifenitshala yangaphandle ye-Acacia Wood (Iinkonzo kunye neNgxelo)
Ifenitshala yangaphandle ye-Acacia Wood (Iinkonzo kunye neNgxelo)
Nasi isikhokelo sethu kwiinkuni zomnga zangaphandle ifanitshala kunye nobubi kunye nendlela yokunyamekela olu hlobo lweenkuni. Xa kuziwa ekuhombiseni ikhaya lakho, awukwazi ukungahoyi ingaphandle lekhaya lakho. Inxalenye enkulu yoku kukuqinisekisa ukuba ipaki yakho, ipatio, kunye neyadi zikulungele nantoni na onokuyiphosa.
ukuvavanya njani ukuba idayimane iyinyani
Oku kubandakanya ukuzinika indawo yokuhlala xa ufuna ukucwina ilanga okanye uqiniseke ukuba iindwendwe zinendawo yokuhlala ehlobo.
Oku kuthetha ukuba uzakufuna ifanitshala yangaphandle eya kuhlala kwaye ilingane nesimbo sakho. Apha, siza kujonga kuyo yonke into ekufuneka uyazi ukuba ucinga ngomthi womnga.
Yintoni ifanitshala yangaphandle ye-Acacia Wood?
I-Acacia Wood zangaphandle zeFenitshala
Umthengi weAcacia Wood yangaphandle
Unonophelo lwefanitshala yangaphandle ye-Acacia Wood
Ioyile yefanitshala yeAcacia Wood yangaphandle
Inkuni ye-Acacia yinto esetyenziswa rhoqo kwifenitshala kunye noyilo lwangaphakathi. Ungayibona kwi-kitchenware, ifanitshala yangaphakathi, ifenitshala yangaphandle, kunye nakwimigangatho. Luhlobo lomthi olunetoni ekhanyayo kunye neepateni zokutya okuziinkozo.
Zininzi izibonelelo zomthi womnga, ngakumbi, ngokunjalo. Siza kungena koku kubunzulu ngakumbi kamva kodwa ayibandakanyi imbonakalo enomtsalane kuphela kodwa ukuhlala ixesha elide kunokuthenjwa nokufikeleleka.
Ukungathethi, ngenani leentlobo ezahlukeneyo zomnga, zininzi iintlobo ezahlukeneyo onokukhetha kuzo ukuze ufumane eyona ndlu yakho ilungileyo.
Ngamanye amaxesha iinkuni ze-Acacia zibizwa ngokuba ziinkumbi okanye iinkawu zenkawu. Nangona kunjalo, iinkuni zemonkeyypod ayisiyonyani kwaye ivela kuhlobo lomthi owahlukileyo. Nangona zombini zineempawu ezifanayo ezenza ukuba zisetyenziswe rhoqo kwifenitshala yangaphandle.
Jonga eli qhekeza le-4 lomngxuma wefanitshala ongaphandle osetelwe IPier 1 [ikhonkco elixhasiweyo]
Okokuqala, makhe sijonge imiba emihle yefenitshala yangaphandle yomthi womnga. Kukho izizathu ezahlukeneyo onokufuna ukubandakanya i-acacia kukhetho lwakho lwangaphandle lwefenitshala.
Ifikeleleka - Kwenye, iinkuni zomnga zifikeleleka kakuhle, ngenxa yoko akuyi kufuneka ukuba uqokelele ifenitshala yomnga njengezinye iindlela. Bona Okuninzi Ukuhonjiswa kwepatio kwizimvo zohlahlo-lwabiwo mali Apha.
Kulula ukusebenza nayo - Kwelinye icala, ikwaqwalaselwa njengemathiriyeli esebenzayo. Oku kuthetha ukuba uyakufumana ukhetho kumthi womnga kwiintlobo ezahlukeneyo zefanitshala yeepatio. Oku kubandakanya iintlobo ezahlukeneyo zobungakanani beenkuni ekubeni i-acacia inokuvunwa kubude naphi na phakathi kwe-8 ukuya kwi-82 yeenyawo.
Ukuzinza -Ngcono, umthi womnga lukhetho olomeleleyo. Oku kubalulekile xa ucinga ngefenitshala ofuna ukuyigcina ngaphandle, apho kunokwenzeka ukuba ivezwe kwizinto.
Ukuqala ukumelana - Ngaphezulu, iinkuni zomnga azinyangeki, ngenxa yoko akuyomfuneko ukuba ukhathazeke ngokukhuhla ngengozi okanye ukonakalisa ifanitshala yakho ngokulula.
Uxhathisa ukubola - Umthi we-Acacia ukwanazo neeoyile zendalo ezinceda ukuba zinganyangeki ukubola.
Iipateni ezintle zokhuni zomthi Ngelixa umthi womnga ngumthi okhanyayo oza kusebenza nawo, useneempawu ezizodwa ezenza ukuba ifanitshala enye ivele kukhuphiswano. Kungenxa yokuba i-acacia ineentlobo ngeentlobo zeepateni zokutya okuziinkozo ukusuka ekukhanyeni kwaye egudileyo ukuya kwisibindi kunye nokubetha.
Ewe kunjalo, akukho nto igqibeleleyo kwaye nomthi we-acacia ifanitshala yangaphandle iza nezinto ezithile ekufuneka ziqwalaselwe. Ezi zizinto ezimbalwa oya kufuna ukuzigcina engqondweni xa ucinga ngomthi we-acacia ifenitshala yangaphandle.
Ukunyamekela -Okunye, iinkuni zomnga zithatha inqanaba lokunyamekela ukuba ufuna libonakale lilungile kwaye lihlala ixesha elide. Siza kujonga nzulu kukhathalelo lwefenitshala yangaphandle yomthi ngomthi.
Ayenzi kakuhle kwiindawo ezishushu Enye into ekufuneka uyiqwalasele yimozulu yendawo yakho kwaye ukuba unemozulu epholileyo okanye ebandayo. Ukuba ufuna ukusebenzisa umthi womnga kwimozulu eshushu kusenokwenzeka ukuba uyilobe. Oku kunokuba yingxaki ngakumbi ukuba uhlala kwimozulu enezitshisi ezishushu nezinokubangela ukuba iinkuni zikhawuleze ziqubeke.
Ungaphulukana nombala wokuqala - Okokugqibela, ukhuni lomnga luthanda ukuba mnyama ekuhambeni kwexesha, ngakumbi xa luvezwa kukukhanya nomoya, nto leyo ngokungathandabuzekiyo ifana nefenitshala yangaphandle.
Eyona ndlela yokuqinisekisa ukuba i-acacia yangaphandle yefenitshala yakho ngokufanayo ngokufanayo, unokujikeleza ifanitshala yakho yangaphandle rhoqo.
Jonga le ndlu ye-acacia yeplanga ebekwe kwisitya se-teak e IPier 1 [ikhonkco elixhasiweyo]
ungalitshintsha njani igama lakho
Njengoko besesitshilo ngaphambilana, ifanitshala yangaphandle yomthi eyenziwe ngomthi ithatha isondlo ukuyigcina ukuba ufuna ukuqinisekisa ukuba ifanitshala iyaqhubeka ikhangeleka intsha. Olunye ukhetho lokugcina simahla jonga eyethu i-aluminium vs ifenitshala yensimbi yentsimbi inqaku.
Apha, siza kuqhekeza into ekufuneka uyazi malunga nokunyamekela umthi wakho womnga ifenitshala yangaphandle.
Okokuqala nokuphambili, uya kufuna ukugcina ucoceko oluqhelekileyo lwefanitshala. Unokwenza oku ngokuthatha i-rag efumileyo kwaye usule uthuli kwifenitshala ukuze ingakhi. Oku kuhle kakhulu ekuqinisekiseni ukuba umthi awomi kwaye uqhekeke.
Ukuba ifanitshala yakho iba manzi, uya kufuna ukuyilungisa kwangoko nayo. Ukuqala, uya kufuna ukuhlamba indawo apho kukho into ethe yachaphazeleka ukususa nayiphi na into eyintsalela. Emva koko, sebenzisa ilaphu elicocekileyo ukomisa loo ndawo.
Ngokuphathelele ukuhlanjwa kwefanitshala, uya kufuna ukusebenzisa amanzi afudumeleyo kunye nesepha ethambileyo kwilaphu elicocekileyo. Oku kuyakunceda ukuphatha nawuphi na umonakalo oza ngendlela yakho ungabi ngqwabalala kwaye wonakalise umthi wakho womnga.
Jonga esi siqwenga sesi-3 sezitulo zangaphandle zomnga kunye netafile enee-cushion kuyo Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Enye indlela yokukhathalela ifanitshala yangaphandle yeplanga lomthi kukuyifaka ioyile. Unokhetho olwahlukeneyo xa kufikwa ekugqibeni ioyile kwifenitshala yangaphandle yomthi womnga kodwa ukubheja kwakho okuhle kukusebenzisa ioyile enombala enika ukhuseleko lwe-UV kunye neoyile ye-linseed kunye neoyile ye-tung ziphakathi kwezona zidumileyo.
Ndiyakuthanda ukuba kunye nawe iikowuti
Xa sele ulungile ioyile, kuya kufuneka ulungiselele nefanitshala. Ukuqala, qiniseka ukuba ifanitshala yakho yome kwaphela ngaphambi kokuqala. Ngale ndlela, awuyi kutshixa ukufuma emithini. Ngoku coca iinkuni njengoko besitshilo ngaphambili. Okokugqibela, sebenzisa i-150-grit sandpaper ukukhangela ifanitshala kwaye uvule iinkozo.
I-rag okanye ibrashi yokupeyinta eshiyekileyo yeyona nto ukubheja kwakho ukusasaza ioyile. Qala ngomaleko omnye weoyile kwaye uqiniseke ukuba ufumana zonke iinxalenye zomthi. Xa usongeza idyasi yesibini, uya kufuna ukuqala ngokuvumela idyasi yokuqala yome ngokupheleleyo.
Emva koko, sebenzisa i-220-grit sandpaper ukulungiselela idyasi yesibini. Ngokuqhelekileyo uyakudinga isambatho sesibini kwiindawo ezibonakalayo zefanitshala kodwa akusoloko kuyimfuneko ukongeza idyasi yesibini ngaphantsi kwefanitshala.
Kwelinye inqaku elinxulumene noko jonga eyethu ulondolozo ifanitshala yangaphandle simahla Isikhokelo.
Ixabisa malini umtshato ophakathi
iilokhwe zomtshato zamanenekazi akhulelweyo
ilokhwe yomtshato eneempawu ezimfusa
Ngubani umfazi ka-donald trump
indlela yokonga imali emtshatweni